Mogadishu Journal » Orodyahanka reer Kenya ee David Rudisha oo markale difaacday biladiisa dahabka
Orodyahanka reer Kenya ee David Rudisha oo markale difaacday biladiisa dahabka
Mjournal :–Orodyahanka reer Kenya ee David Rudisha ayaa difaacday billada dahabka ee orodka 800m ee Olympic-ada Adduunka.
27-jirkan ayaa soo bandhigay orod aad u heer sarreeya muujiyayna khibraddiisa kaddib markii wareega hore uu ka hormaray Alfred Kipketer.
Rudisha ayaa hogaanka orodka la wareegay markii 300m un ay ka harsan tahay tartanka, iyadoo Alfred Kipketer oo horkacayay orodka uu u muuqday inuu tabar dhigay, markaa wixii ka dambeeyayna waxa uu Rudisha u muuqday mid aanan la qaban karin, sidaana waxa uu ku orday 1 daqiiqo iyo 42.15 ilbiriqsi.
Kipketer ayaa masaafo aan caadi aheyn jaray 200m ee ugu horreysay isagoo ku orday 23 ilbiriqsi oo kaliya.
Hasayeeshee 19-jirkan oo Rudisha ku garaacay isreebreebkii orodada ee Kenya ayaa ku dhameystay kaalinta 7-aad ee tartanka Rio.
Guusha Rudisha uu gaaray ayaa ka dhigtay inuu yahay orodyahankii ugu horreeyay ee biladdiisa 800m dib ugu guulaysta tartanka Olympic-ada tan iyo orodyahan Peter Snell oo u dhashay dalka New Zealand oo sidaasi sameeyay 1964.
Dowladda oo wadda-hadalo ka dhax fureysa Galmudug iyo Ahlu Sunna